1914-1918: "Dagaalkii Dilay Eebbe", Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
1914-1918: "Dagaalkii Dilay Eebbe": Jawaab
"Ilaah wuu inala jiraa" wuxuu ahaa hal-ku-dhigga, oo umuuqda wax la yaab leh maanta, kaas oo askar badan oo Jarmal ah oo dagaal u galay boqol sano ka hor ay ku xardheen suunka suunka. Xusuus-qorkan yar ee ka socota kaydka taariikheed ayaa ina siinaya faham wanaagsan oo ku saabsan sida burburka Dagaalkii Koowaad ee Adduunka laga soo bilaabo 1914-1918 ay ahayd inay ku salaysnaato caqiidada diinta iyo caqiidada Masiixiyada. Wadaadada iyo wadaaddadu waxay xubnahooda xubnaha ka ah ku dhaleeceeyeen dammaanad banal ah oo ay ku ballanqaadeen in Ilaah uu ku yaallo dhinaca ay ka soo jeedaan. Cilladaha ka dhanka ah ka qeybqaadashada kaniisada ee dagaalka, oo galaaftay nolosha ku dhawaad ​​toban milyan oo qof, oo ay ku jiraan laba milyan oo Jarmal ah, ayaa weli saameyn ku leh maanta.
Fiqiga Roman Catholic-ga Gerhard Lohfink ayaa si sax ah u raad raacay wixii ka dambeeyay: "Xaqiiqada ah in Masiixiyiintu ay si xamaasad leh ugu baxeen dagaal ka dhanka ah Masiixiyiinta markay ahayd 1914, iyagoo la baabtiisay kuwii la baabtiisay, sinaba looma tixgelin inay tahay shaqo burburin kaniisadda ...". Bishopka London wuxuu kula dardaarmay jalayaasheeda inay la dagaallamaan "Eebbe iyo Aabaha)" sidii haddii Eebbe ubaahanyahay caawimaadeena. Switzerland dhexdeeda dhexdhexaad ah, wadaadka da'da yar Karl Barth wuxuu aad ula yaabay xudunta marka loo eego xaqiiqada ah in aqoonyahanada seminary-yadu ay si iskood ah u duulaan qaylada dagaalka "An Waffen"! Joornaalka caanka ah ee "The Christian World" ayuu ku mudaaharaaday: "Aad ayaan uga xumahay in aan arko sida damaca dagaal iyo caqiidada masiixiga loogu dhex daro jahwareer rajo la'aan ah."
"Ciyaaraha Qaramada Midoobay"
Taariikhyahanadu waxay daaha ka qaadeen sababaha tooska ah iyo kuwa aan tooska ahayn ee isku dhaca, kaasoo ka bilaabmay gees yar oo ka mid ah Balkans ka dibna ku lug yeeshay quwadihii waaweynaa ee Yurub. Saxafiga Faransiiska ah Raymond Aron wuxuu ku soo koobay tan shaqadiisa "Qarnigii Labaad Dagaal" ee bogga 16: "Xiisadaha sii kordhaya waxay ahaayeen ilaa saddex qodobo oo waaweyn oo iskahorimaad ah: xafiiltanka u dhexeeya Austria iyo Russia" Balkans, dagaalkii Franco-German ee Morocco iyo tartankii hubka - badda dhexdeeda inta u dhaxaysa Ingiriiska iyo Jarmalka iyo dhulkaba oo hoos yimaadda dhammaan awoodihii. Labadii dambe sababaha dagaalka ayaa wadada u xaarey xaaladda; kii hore ayaa siiya iftiinka.
Taariikhyahannada dhaqameedku si qoto dheer ayey u socdaan sababaha. Waxay baarayaan muuqato ifafaale xumo ah sida kibir qaran iyo cabsi qoto-dheer, oo labaduba intabadan ah iscelin. Taariikhyahan Düsseldorf Wolfgang J. Mommsen wuxuu ku soo koobay culeyskan: "Wuxuu ahaa halgan u dhexeeya nidaamyada siyaasadeed ee kala duwan iyo caqliga oo aasaas u ahaa tan" (Jarmal Jarmal 1867-1918, Jarmalka p. 1867-1918], p. 209). Xaqiiqdii ma aysan ahayn dawlad keli ah oo ka dhex shaqaysatay keli-talisnimada iyo waddaninimadnimada 1914. Boqortooyada Ingriiska waxay xustay xasilloonaan dabacsan oo ay ciidamadooda boqortooyadu ku amreen in ka badan rubuc adduunka adduunka boqortooyo aan qorraxda weligeed dhigin. Faransiiska ayaa Paris ka dhigtay magaalo ay Eiffel Tower ka marag kacayso adeegsiga hal abuurnimo ee teknolojiyadda.
"Ku farax sida Ilaahay Faransiiska" waxay ku ahayd hadal Jarmal ah laga soo bilaabo wakhtigaas. Iyaga oo leh "dhaqankooda" gaarka ah iyo nus qarni ee guulaha la taaban karo ee ay gaareen, Jarmalku waxay isu arkeen inay yihiin kuwa ka sarreeya, sida taariikhyahan Barbara Tachman u dhigay:
“Jarmalku waxay ogaadeen inay metelaan awooda militari ee ugu awooda badan dhulka, ganacsatada ugu awooda badan iyo baananada ugu firfircoon ee gala qaaradaha oo dhan, kuwaas oo ku taageeray Turki inay maalgeliyaan waddo tareen oo ka bilaabanaysa Berlin ilaa Baqdaad iyo sidoo kale ganacsiga Latin Amerika lafteeda xidhxidhay; Waxay ogaayeen inay caqabad ku yihiin awooda ciidamada badda ee Ingiriiska waxayna, dhanka aqoonta, waxay awood u yeesheen inay si habeysan u qaabeeyaan laan kasta oo aqoon ah oo ku saleysan mabda'a sayniska. Waxay mudan yihiin door muhiim ah (The Proud Tower, bogga 331).
Waa wax la yaab leh inta jeer ee ereyga “kibirka” uu ka muuqdo falanqaynta adduunka ilbaxnimada ah ka hor 1914, waana in aan laga tagin in looma aha in qayb kasta oo Kitaabka Quduuska ahi ay soo saarto maahmaahda: “kibir kibirku wuxuu yimaadaa ka hor dhicitaanka”, laakiin tusaale ahaan Kitaabka Quduuska ah ee Luther 1984 oo ah erayga saxda ah sidoo kale waxaa loola jeedaa: "Ku alla kii halligmaana hortiisuu kibirsan doonaa" (Maahmaahyadii 16,18).
Burburku waa inuusan noqon danta kaliya ee guryaha, beeraha iyo guud ahaan ragga labka ah ee magaalooyinka yar yar. Dhaawaca ugu weyn ee lagu soo gaadhsiiyay dhaqanka reer yurub ayaa loo malaynayey inuu yahay "geerida ilaahay", sida qaar ay ku tilmaameen. In kasta oo tirada kuwa wax tusaya kiniisadda Jarmalka ay hoos u dhacday sannadihii ka hor 1914 iyo dhaqankii caqiidada masiixiga lagu dhaqmayey Galbeedka Yurub oo dhan markii ugu horreysay qaab “adeegga bushimaha”, aaminaadda Eebbe ee nimcada leh ayaa dad badani u dhinteen iyadoo ay ugu wacan tahay naxdinta leh. Dhiig daadashada ka daatay, taas oo keentay in illaa iyo hadda aan la garaneyn gawraca.
Caqabadaha waqtiga casriga ah
Sida qoraaga Tyler Carrington xusey ee ku saabsan Bartamaha Yurub, Kaniisadda oo ah hay'ad ahaan "had iyo jeer waxay dib uga noqonaysaa wixii ka dambeeyay 1920-meeyadii," iyo waxa ka xun, "maanta tirada cibaadada ayaa ah mid aan horay u dhicin." Hadda ma ahayn kiiska in ka hor 1914 waxaa jiray hadal ah Da'da Dahabka ah ee Iimaanka. Wax ka qabasho taxane ah oo qoto dheer oo ka socota xerada diimeed ee u doodaya qaab taariikhi ah oo muhiim u ah ayaa horseeday geeddi socod joogto ah nabaad guurka oo la xiriira aaminaadda waxyiga rabbaaniga ah. Horey udhaxeeyey 1835 iyo 1836 David Friedrich Strauss 'Life of Jesus, oo si taxadar leh loo habeeyay, ayaa su'aal ka keenay dhaqan ahaan cibaadada Masiix ee dib loo dhigay. Xitaa Albert Schweitzer wuxuu ahaa Ciise isu muujiye inuu yahay wacdiye daahiran oo qadiim ah shaqadiisa 1906 Taariikhda Nolosha-Cilmi Baadhis, kaas oo aakhirka ka ahaa qof ka wanaagsan qof Ilaah ka wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, fikradan kaliya waxay gaadhay "waxgarad" muhiim ah iyada oo jahwareer iyo dareemid khiyaanayn ah in malaayiin reer Jarmal ah iyo reer Yurub kale ay ogaadeen wixii ka dambeeyay 1918. Boodhka sawirka, moodello aan looga talagalin oo fikir ah ayaa qaatay qaab, sida cilmiga Freud, cilmiga Einstein ee falcelinta, Marxism-Leninism iyo, tan ugu sarraysa, Friedrich Nietzsche hadalkiisii ​​si qaldan loo fahmay "Ilaah waa dhintay, [...] oo waannu dilnay". Dad badan oo badbaaday Dagaalkii Koowaad ee Dunida waxay dareemeen in aasaasayaashoodu ay yihiin kuwo aan laga qoomameyn karin. Sanadkii 1920-kii wuxuu keenay da'da jazz ee America, laakiin waqti aad u qadhaadh ayaa ku bilaabmay celcelis ahaan Jarmalka, kaas oo uu ka soo gaadhay guuldaradii iyo burburka dhaqaale. Sannadkii 1922 hal rooti oo kibis ah ayaa qiimahiisu ahaa 163 astaamood, taasoo ah qiimaha soo afjaray 1923 milyan oo aan xad lahayn ilaa 200.000.000.
Xitaa haddii garabka bidix ee Weimar Republic (1919-1933) wuxuu isku dayay inuu ilaaliyo amar gaar ah, malaayiin ayaa laga xayuubiyey wajiga dagaalka, kaas oo Erich Maria Remarque aysan raad ku helin wax ku cusub shaqadiisa Galbeedka. Askarta guryahooda ka baxdey waxaa ku burburay farqiga udhaxeeya waxa ku faafay dagaalka ka fog kan hore iyo xaqiiqada ayaga oo lagu tusay qaab jiirka, injirta, madaafiicda, cannibalism iyo toogashada maxaabiista dagaalka. "Waxaa jiray warar xan ah oo sheegaya in weeraradeenna ay la socdaan dhawaaqyo muusiko ah iyo in dagaalku ahaa mid gaba-gaba ah oo hees iyo guul noo ah [...] Kaliya waxaan ogaanay runta dagaalka; maxaa yeelay waxay ahayd indhahayaga hortooda " (waxaa laga soo xigtay Ferguson, Dagaalkii Dunida, p. 119).
Ugudambeyntii, in kasta oo ay isa soo dhiibeen, Jarmalka waxay ahayd in ay aqbalaan ciidan qabsanaya shuruudaha uu soo rogay Madaxweynaha Mareykanka Woodrow Wilson - oo culays ku ahaa bixinta magdhowga $ 56 bilyan, iyada oo laga waayey dhul ballaaran oo ku yaal Bariga Yurub. (iyo ugu yaraan inta badan deegaannadeeda) oo ay ugu hanjabeen dagaallo dariiqyada kooxo hantiwadaag ah. Hadalka Madaxweyne Wilson ee ku saabsan heshiiska nabada ee ay ahayd in dadka Jarmalka ay saxeexaan markay ahayd 1919 wuxuu ahaa in hadii uu Jarmal yahay uusan saxeexin. Ninka reer Ingiriisiga ah ee Winston Churchill ayaa saadaaliyay: "Tani ma aha nabad, laakiin waa xabbad-joojin 20 sano ah." Sidee buu saxsanaa!
Rumaysad ku noqoshada
Rumaysadku waxay la kulmeen dib-u-dhacyo waaweyn sannadihii dagaalka kadib. Wadaad Martin Niemöller (1892-1984), oo ah kan loo yaqaan 'Iron Cross' oo markii dambena ay qabsadeen Naasiyiinta, wuxuu arkay "sannadihii mugdiga" sannadihii 1920-yadii. Waqtigaas inta badan Mudaharaadyadi Jarmalka waxay ka koobnaayeen 28 kaniisadood oo Kaniisadda Lutheran ama Reformed Church, in yar oo kamid ah baabtiisyada ama hababka loo adeegsado. Martin Luther wuxuu ahaa taageere xoog leh addeecista maamulka siyaasadeed, ku dhowaad kharash kasta. Ilaa la asaasay qaran qaran ee xilligii Bismarck sanadihii 1860naadkii, amiirrada iyo Boqortooyadu waxay gacanta ku dhigeen kaniisadaha ku yaal carrada Jarmalka. Tani waxay abuurtay xaalado aan fiicnayn oo loogu talagalay magacaabista dilaaga ah ee bulshada guud ahaan. In kasta oo fiqiga caanka ah ee adduunka ka hadlayey meelaha fiqiga ee ay adag tahay in la fahmo, cibaadada jarmalka waxay inta badan raacday nidaamkii kaniisadda, iyo kiniisaddii lidka-nacaybku waxay ahayd amarkii maalinta. Weriyaha Jarmalka William L. Shirer ayaa ka warbixiyay kala qaybsanaanta xagga diinta ka dib Dagaalkii Koowaad ee Adduunka:
“Xitaa Weimar Republic waxay la dhaqmey wadaadada Protestant-ka intooda badan; kaliya maahan inay u horseeday dhigaalista boqorrada iyo amiirrada, laakiin sidoo kale waxay ku leedahay taageerada inta badan Catholics iyo hantiwadaagga. . Waanu garan karnaa dareenka udhexeeya cibaadada masiixiga iyo dadka hadii aan ka warqabno shaqsiyaadka sida cajiibka ah ee kaniisadda sida Martin Niemöller iyo Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) halkii laga matalay sharciga marka laga reebo. Hawlaha sida Guusha, Bonhoeffer wuxuu iftiimiyey daciifnimada kaniisadaha sida ururro, fikrad ahaan, hadda ka dib ma yeelan doonaan farriin dhab ah oo ku saabsan cabsida dadka qarniga 20aad Jarmalka. Aqoonyahan taariikhyahan ah Scott Jersak, ayaa yidhi: "Meesha iimaanku ka badbaaday, kuma sii tiirsanaan karo codka kiniisad doonaysa inay si sharci ah u sharciyeeyo sida daadadka 'aan la abaabulanayn sida [1914-1918]." Wuxuu raaciyay: "Boqortooyada Ilaah uma istaago rajo madhan utopian ama dib u gurasho qalloocan oo magangal la ilaaliyo ah ”. Fiqi-yahanka Jarmalka Paul Tillich (1886-1965), oo lagu qasbay inuu ka baxo Jarmalka sanadkii 1933 ka dib markii uu ahaa wadaad wadaad dhulkii dagaalkii koowaad ee adduunka, wuxuu aqoonsaday in kaniisadihii Jarmalka si weyn loo aamusiiyay ama ay noqdeen wax aan micno lahayn. Waxay awoodi kari waayeen inay ka dhaadhiciyaan shacabka iyo dowladaha inay qaadaan mas'uuliyadda oo ay ku beddelaan cod cad. "Looma adeegsan jirin inaan u duulo meel sare, waxaa naloo jiifiyey dhinaca moolka," ayuu markii dambe wax ka qoray Hitler iyo the saddexaad Reich (1933-1945). Sidaan soo aragnay, caqabadaha waqtiga casriga ah had iyo jeer waxay ahaayeen kuwo shaqeynayay. Naxdinta iyo jahwareerka ee dagaalkii dunida ee cilaawaayeen ayaa loo baahnaa si ay u keenaan waxqabadkooda buuxa midho.
Ma dhinteen… ama nool?
Sidaa awgeed cawaaqib xumada "dagaalkii Ilaahay dilay" oo keliya kuma aha Jarmalka. Taageerada Hitler ee kaniisadda waxay ku kordhisay xaqiiqda inay jirto dhacdo ka sii xun, Dagaalkii Labaad ee Adduunka. Xiriirintan waa in la ogaadaa in Ilaah uu weli noolaa kuwa isaga isku halleeyey. Nin dhalinyaro ah oo la yiraahdo Jürgen Moltmann waa inuu markhaanti ka noqdaa sida nolosha dad badan oo asxaabtiisa kamid ah looga tirtirayay dugsiga sare intii lagu gudajiray qaraxii foosha xumaa ee Hamburg Si kastaba ha noqotee, khibradani waxay ugu dambeyntii horseedday dib u soo nooleynta iimaankiisa, sida uu qoray:
Sanadkii 1945 waxaan ahaa maxbuus dagaal xero ku taal Belgium. Reich-kii Jarmalka wuu burburay. Auschwitz wuxuu siiyay dhaqanka Jarmalka dhabarjabkii ugu dambeeyay. Magaaladaydii Hamburg waxay ahayd mid burbursan, nafteena kama duwanaan lahayn. Waxaan dareemay in Ilaahay iga tegay dadkuna rajadaydii yaraydna waxay ku xirnaayeen bud-cad [...] Xaaladdaas oo ah wadaad wadareed oo Mareykan ah ayaa i siiyay Kitaabka Quduuska ah waxaanan bilaabay inaan akhriyo ".
Markuu Moltmann dhacay inuu dul maro marinka kitaabiga ah ee ku saabsan qaylada Ciise ee iskutallaabta dusheeda: "Ilaahayow, Ilaahayow maxaad ii dayrisay?" (Matayos 27,46) ayaa laga soo xigtay, wuxuu bilaabay inuu si fiican u fahmo farriinta ugu muhiimsan ee farriinta masiixiga. Wuxuu sharraxay: “Waan fahmay inuu Ciisa yahay walaalkii rabbaaniga ah ee silicayaga. Waxay rajo siisaa maxaabiista iyo kuwa la dayacay. Isaga waa kan xoriyadeena naga saara dembiga, kaas oo naga niyad jaba oo naga diidaya wax mustaqbal mustaqbal ah [...] Waxaan ku dhiirraday inaan doorto nolosha hal dhibic, halkaas oo mid laga yaabo inuu diyaar noqdo, mid Dhamaadka saar Isbahaysigan hore ee Ciise, oo ah walaalka silica ku jira, waligey igama dhigin tan iyo markaas. (Waa ayo Ciise Masiix maanta? P. 2-3).
Boqollaal buugaag, maqaallo iyo casharro, ayaa Jürgen Moltmann wuxuu caddeeyay in Ilaah uusan dhiman gebi ahaanba, inuu ku nool yahay ruuxa ka soo baxa wiilkiisa, kan ay Masiixiyiintu ugu yeeraan Ciise Masiix. Sidee cajiib u tahay xitaa boqol sano ka dib waxa loogu yeero "dagaalkii dilay Ilaah", dadku weli waxay jid u helaan Ciise Masiix iyagoo maraya khataraha iyo jahwareerka waqtigeenna.